Meleeshiyaadka Beesha Mareexaan ee Ka Tirsanaa Kooxda Shabaabka oo Hubka Dhigay | KEYDMEDIA ONLINE
Meleeshiyaadka Beesha Mareexaan ee Ka Tirsanaa Kooxda Shabaabka oo Hubka Dhigay
Kismaayo (Keydmedia) - Ayadoona wali Sheekh C/raxmaan Fiilow uu gacanta ugu jiro Kooxda Amniyaadka ee Axmed Godane ayaa waxaa arrintaasi ka Gadoodday Maleeshiyaadka Beesha Mareexaan ee uu ka soo jeedo Fiilow oo iyagu maanta Hubka dhigay islamarkaana shaaciyay inay ka baxeen Maleeshiyaadka Shabaab.
Waxaana aad cabsi looga qabaa in xiisad ku aadan tilaabadaasi ay Kismaayo ka dhacdo.
Ilaa 350 nin oo ka tirsanaa Shabaabka kana soo jeedo Beesha Mareexaan ayaa Hubkoodii kala soo wareeggay fariisimaha ay Shabaabku Kismaayo ku leeyihiin, waxaana ay sheegeen in hadii aysan marnaba iyagu ka amaan helaynin kooxda Aminiyaakda Godane aysan dagaalka ku sii jiri doonin.
Nabadoon kamid ah Beesha Mareexaan oo magaciisa qariyay ayaa Keydmedia.net u sheegay in tani ay tahay go'aankii ugu dambeyay ee ay ciidamada Beeshu gaareen, maadaama ay soo laa laabteen falal afduubka ah ee ay Kooxda Godane ay u geysanayaan ragga u dhashay beesha Mareexaan ee Shabaab ka tirsan.
Ilaa hada waxaan war iyo wacaal loo haynin halka uu ku sugganyahay C/raxmaan Fiilow oo ay xili habeen ah gurigiisa ka wateen Maleeshiyaadka hoos taga Dhagr qabe Axmed Godane oo ah hogaamiyaha Ajaanibta Shababka, waxaana la sheegay in wali baaritaano lagu hayo Fiilow.
Kooxda Aminiyaadka Godane ayaa horay u dilay dhowr Sargaal oo ka soo jeeda Beesha Mareexaan oo ka tirsanaan Shababka kadib markii ay is maandhaafeen Dhagar qabe Godane.